आस्थाको सिसीटिभी फुटेज बाहिरिएपछि अव के हुन्छ? - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
आस्थाको सिसीटिभी फुटेज बाहिरिएपछि अव के हुन्छ?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गायिका आस्था राउतलाई चेकजाँचको क्रममा प्रहरीले ‘दुर्व्यवहार’ गरेको विषयमा पछिल्लो समय पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । १ माघमा भद्रपुर जाने क्रममा विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा चेकजाँचका क्रममा गायिका राउत र महिला प्रहरीबीच विवाद भएको थियो । यो विवादमा कसैले प्रहरीको आलोचना गरेका छन् भने केहीले गायिका राउतकै कमजोरी औँल्याएका छन् ।
गायिका राउतले आफूलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखेपछि विवाद सुरु भएको थियो । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सिसिटिभी फुजेटअनुसार कफी र ज्याकेटलाई लिएर विवाद सुरु हुन्छ । एक्सरे गेटबाट प्रवेश गरेपछि महिला प्रहरीले ज्याकेट खोल्न आग्रह गर्दा राउत रिसाउँछिन् । हातमा रहेको कफीको कप पनि राख्न लगाउँछिन् । आक्रोशित हुँदै राउत ज्याकेट डेटल डिटेक्टर मेसिनमा राखेर चेकिङमा आउँछिन् । महिला प्रहरी रमिता श्रेष्ठले शरीर चेकजाँच गरी उनलाई कफी फिर्ता दिन खोज्छिन् । उनी लिन मान्दिनन् । उल्टो प्रहरीलाई गाली गरेपछि विवाद सुरु भएको देखिन्छ । त्यही क्रममा उनको कफी झोलामा पोखिन्छ । महिला प्रहरीले सुरुमा हात तानेर जबर्जस्ती दिन खोज्छिन् । पछि झोलाभित्रै राखिदिन खोजेपछि भनाभन हुन्छ । त्यही विषयलाई लिएर राउतले आफूलाई प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको भन्दै फेसबुकमा भिडियो राखेपछि विवाद सार्वजनिक भएको हो ।
प्रहरीले त्यसको ‘काउन्टर’मा शुक्रबार सिसिटिभी भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । भिडियोमा प्रहरी चेकजाँचलाई राउतले असहयोग गरेको देखिन्छ । तर, प्रहरीले आफ्नो बचाउका लागि विमानस्थलको संवेदनशील भिडियो अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रवाशी नेपाली बैंग्लोर गु्रपको राष्ट्रिय भाव बोकेको गीत ‘सोच बदलिए’ सार्वजनिक
फेसबूकमा भाइरल भएको यो जोडी ? को हुन ? यस्तो छ नालिबेली
कोभिडको असर रहँदासम्म मौद्रिक नीति लचिलो रहन्छ :…
पुटिनकी छोरीले लगाईन् विश्वकै पहिलो कोरोना भ्याक्सिन